Intengo ibekwe kahle kuma-Rs 20,000. Qasha le ndawo, ngoba okunikezwayo akuhlali isikhathi eside. Indawo ingama-650 Feet Square, ubukade uyifuna! Leli Flat lisenkabeni yedolobha eBahria Town Rawalpindi. Ngeke uthole iFlat kanjena kaningi. Ngakho-ke, kungcono ukushaya iwashi ngaphambi kokuba omunye umuntu alibambe ukuze athole induduzo. Idume ngokuzinza kwayo kwezindlu, iBahria Town Phase 7 inikela ngamathuba amahle kakhulu okutshala imali. Ungafunda izici eziphawulekayo zempahla ezingezansi. Isimo somoya esimaphakathi ukuze usindiswe emlilweni oshisayo wezinyanga zasehlobo. Akudingeki ukhathazeke ngokulahlwa kukadoti endaweni yakho entsha. Isivele inakekelwa. Isakhiwo sefulethi sinikeza indawo enhle yokungenisa indawo yokwamukela izivakashi nendawo yokwamukela izivakashi. Hlala uthokomele ekhaya lakho ngenxa yohlelo lokushisa oluphakathi nendawo. Uma ufuna eminye imininingwane, sicela uxhumane nathi.